Dowled Gobaledka Galmudug Oo Xiriika U Jaray Dowladda Federalka – Goobjoog News
Dowled gobaledka Galmudug ayaa sheegtay in ay joojisay wada shaqeyntii ay kala dhaxeysay dowladda federalka ee Soomaaliya.
Maamulka ayaa xusay in dowladda dhexe ay faragalin iyo burbirin ay ku hayso maamul gobaledyada xubnaha ka ah dowladda dhexe gaar ahaan Galmud taasna ay sabab u tahay in uu maamulku joojiyo wada shaqeyntii kala dhaxeysay dowladda federalka,
Markii ay arkeen faragalinta, kala qeybinta iyo burburinta Galmudug oo ay wadaan madaxda dowladda federalka.
Markii uu arkay isku dayga madaxdu ay ku doonayaan afduubka dowlad gobaledyada dalka gaar ahaan Galmudug.
Marka aan araknay ku tumashada arrimaha masiiriga u ah dalka sida.
cunaqabateenta dhaqaale sida (canshuuraha kaluumeysiga iyo qoondadii Galmudug ku laheyd miisaaniyadda dalka iyo qeybtiii miisaaniyadda beesha caalamka)
Is-hortaaga mashaariicda horumarineed ee deegaanada dowlad gobaledka Galmudug.
Qoraalka ka soo baxay dowled gobaledka Galmudug ayaa waxa uu imaanayaa aydoo asbuucii tagay dowled gobaledka Puntland ay shaacisay in ay joojisay wada shaqeytii dowladda federalka ayadoo bandhigtay cabasho kuwan la mid ah.
Askar Ka Tirsan Dowladda Federaalka Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho
Gudoomiye Jawaari Oo Gaaray Magaalada Baydhabo Ee Gobalka Baay
Xisbiga Jamhuuriga ee Dalka Mareykanka oo Ka Fiirsanaya Murashaxnimada Donald Trump
Otsany ctbxcw sildenafil is there a generic cialis available in the us
Hqzzne chajth Real cialis for sale rx pharmacy
cialis in canada pharmacy cialis with dapoxetine 80mg generi...
local pharmacy with delivery service https://edmeds.buszcent...
buying cialis with dapoxetine Lamictal where can i buy ciali...
viagra patent ends viagra paypal uk cialis and viagra taken...
viagra online 365 top viagra dapoxetine how to puchase viagr...